China Stamping Robot Onye nrụpụta na onye na-eweta |Yunhua
HY1010B-140 bụ robot stamping kacha ochie nke YOOHEART, nhazi ya na ngwa ngwa na-agba ọsọ na-enyere aka ịkwalite nrụpụta yana hụ na nchekwa ndị ọrụ.
- Kọmpat Ọdịdị;
- Nnukwu ogwe aka ogologo: 1400mm;
-Mfe mmemme na idobe;
HY1010B-140 bụ robot stamping kacha ochie nke YOOHEART, nhazi ya na ngwa ngwa na-agba ọsọ na-enyere aka ịkwalite nrụpụta yana hụ na nchekwa ndị ọrụ.Na ọtụtụ ahụmahụ Automatic Stamping Production Line, Yooheart nwere ike inyere ndị ahịa aka ịmepụta ahịrị mmepụta akpaaka zuru oke, ma nwalee ya maka gị, n'ikpeazụ nye nwoke gị ọzụzụ zuru oke ka ndị ahịa wee jiri ya mee ihe.
Axis Ibu kacha Nkwaghari Ike gburugburu Ibu
4 10KG ±0.08 2,7 nke 0-45 ℃ Enweghị iru mmiri 60kg
Oke ngagharị J1 J2 J3 J4 Nwụnye
± 170° +10°~+125° + 10°~-95° + 360° Ala / mgbidi / ụlọ
Ọsọ ọsọ J1 J2 J3 J4 IP larịị
Nkeji 20 nke Stamping robot maka igwe igwe
Ụlọ ọrụ na-enweghị ọrụ: iji Yooheart robot jikọọ igwe igwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe niile chọrọ naanị ndị ọkachamara 2 n'ọrụ.
4 Axis akpaaka stamping ahịrị
Ahịrị pịa akpaaka na-eji robot
Mpempe akwụkwọ metal akpaghị aka na-emepụta ahịrị
Ahịrị mpempe akwụkwọ ígwè arụrụ arụrụ arụ ọrụ zuru oke
Onye ahịa ọ bụla kwesịrị ịma ROO HEART robot nke ọma tupu ha azụọ ya.Ozugbo ndị ahịa nwere otu ROO HEART robot, onye ọrụ ha ga-enwe ọzụzụ ụbọchị 3-5 n'efu na ụlọ ọrụ YOO HEART.A ga-enwe otu wechat ma ọ bụ WhatsApp Group, ndị ọrụ nka anyị na-ahụ maka ọrụ ire ere, eletriki, ngwa ngwa, sọftụwia, wdg ga-abanye. Ọ bụrụ na otu nsogbu emee ugboro abụọ, teknụzụ anyị ga-aga ụlọ ọrụ ndị ahịa iji dozie nsogbu ahụ. .
Q. Ga-eziga nwoke gị na ụlọ ọrụ anyị maka ntinye na ọzụzụ?
A, Maka azịza zuru oke, anyị ga-eziga onye ọrụ na saịtị gị maka ọzụzụ na debug, ụgwọ niile dabere na ọnụ ahịa gị.
Ajụjụ. Kedu ụdị ozi m ga-enye ka ị nwee ike ịnye anyị onyinye maka stamping robot?
A. Maka ọkọlọtọ stamping robot, anyị nwere ike inye gị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata.Ma n'ihi na akpaka stamping mmepụta akara, anyị kwesịrị ịmatakwu Ama.Dị ka igwe Press ole ị nwere, ihe nlereanya ha na njikọ njikọ, wdg.
Q. ị nwere ike ịnye anyị azịza gbasara stamping robot?
A. N'ezie, anyị nwere ike inye ngwọta dị mfe ka i wee mara ndepụta nke ọrụ a.
Q. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ngwọta zuru ezu, ị nwere ike inye anyị?
A. Maka ngwọta zuru oke, ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ maka nke ahụ.
Q. Kedu ụdị igwe Press nwere ike iji maka ahịrị mmepụta akpaaka?
A. Igwe a na-ebipụta akwụkwọ ga-enwe ike ikwurịta okwu na robot anyị, ka e wee kesaa akara n'etiti igwe igwe na robot.
Nke gara aga: Robot stamping maka igwe Press
Osote: Stamping robot maka akpaka pịa mmepụta ahịrị
4 Axis Stamping Robot Maka igwe pịa